Avia hisotro | Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra eran'izao tontolo izao Soisa, Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Avia hisotro
Indray tolakandro mafana dia niasa tao amin'ny tanimboly paoma niaraka tamin'ny raibeko tamin'izaho mbola zatovo. Nangataka ahy izy mba hitondra azy ny siny misy rano mba hahazoany misotro ny an'i Adam's Ale (midika hoe rano madio) afaka misotro. Izany no endrika voninkazo nataony tamin'ny rano madio. Toy ny rano madio mamelombelona ara-batana, ny Tenin'Andriamanitra dia mamelombelona ny fanahintsika rehefa miofana ara-panahy isika.
Jereo ny tenin'i Isaia mpaminany hoe: «Fa tahaka ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any, fa mandoka ny tany ka mahavokatra ary mampitombo, dia manome voa hafafy sy mofo hohanina izy, toy izany koa ny Teny izay aloaky ny vavako, dia tokony ho: Tsy hiverina amiko foana izany fa hanao izay tiako, ary hahomby amin'izay andefasako azy » (Isaia 55,10: 11).
Ny ankamaroan'ny faritry Isiraely, izay nanoratana ireo teny ireo an'arivony taona lasa izay, dia maina raha tsy hiteny afa-tsy izay. Ny orana dia tsy midika ho fahasamihafana eo amin'ny fijinjana ratsy sy ny fijinjana tsara fotsiny, fa indraindray eo amin'ny fiainana sy ny fahafatesana.
Amin'ireto teny avy amin'i Isaia ireto dia miresaka momba ny teniny Andriamanitra, ny fanatrehany ny famoronana mifandraika amin'izao tontolo izao. Ny fanoharana izay ampiasainy hatrany dia ny rano, ny orana ary ny lanezy, izay manome antsika fiterahana sy fiainana. Mariky ny fanatrehan'Andriamanitra ireo. «Ny sipres dia tokony hitombo fa tsy tsilo sy rotra fa tsy ahidrano. Ary izany dia hatao amin'ny Tompo ho voninahitra sy famantarana mandrakizay izay tsy ho lany " (Isaia 55,13).
Fantatrao ve izany? Eritrereto ny ozona rehefa noroahina tany ivelan'ny Saha Edena i Adama sy i Eva: «Amin'ny fahasarotana dia hamelomana ny tenanao amin'izany ianao, ny saha amin'ny andro rehetra hiainanao. Tsilo sy hery no ho entiny ho anao, ary hihinana zava-maniry any an-tsaha ianao. (Nomery 1: 3,17-18).
Ao amin'ireo andininy ireo no ahitantsika ny mifanohitra amin'izany - ny fampanantenan-tsodrano sy fahabetsahana fa tsy efitra sy fahaverezana bebe kokoa. Amin'ny lafiny andrefana manokana dia mihoatra ny vitan'ny zavatra ilaintsika ny zavatra ilaintsika. Saingy mbola ao am-pontsika ny hain-tany sy ny tsilo ary ny tsilo. Ao amin'ny efitra foana isika.
Tena ilaintsika ny orana sarobidy sy ny fanavaozan'Andriamanitra mahafinaritra amin'ny fiainantsika izay milatsaka amintsika. Ny fiarahamonina, ny fanompoana ary ny fanompoana ny rava dia toerana mahavelona sy manatanjaka antsika hihaonantsika amin'Andriamanitra.
Mangetaheta ve ianao anio? Leo ny tsilo izay mitombo noho ny fialonana, ny tsilo maniry amin'ny fahatezerana, ny tany karankaina mipoitra avy amin'ny fitakiana, ny adin-tsaina, ny fahasosorana ary ny tolona?
Nanolotra rano velona velona ho anao Jesosy: «Izay misotro ity rano ity dia hangetaheta indray; fa na iza na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika mankamin'ny fiainana mandrakizay » (Jaona 4,14).
Jesosy no loharano vaovao. Avia hisotro ny rano izay mikoriana foana. Io no mahavelona an'izao tontolo izao!